Times24 Nepal » माथिल्लो त्रिशुली–१ का लागि ४५ करोड ३२ लाख डलरको वैदेशिक लगानी सम्झौता
काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाका निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटेको छ। सो लगानीबारे शुक्रबार सम्झौता भएको छ। २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना कोरियन कम्पनीले निर्माण गर्नेछ। कम्पनी र लगाकनीकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच शुक्रबार लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सक इ र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाकाप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार आयोजनाको लगानी मध्ये ७० प्रतिशत रकम ऋण र ३० प्रतिशत ईक्विटीबाट जुटाइएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानीगर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम ईक्विटीबाट जुटाइएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८. ७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ । उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ बीहब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर ऊर्जा प्राप्त हुने छ ।
नेपाल सरकार र नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपपमेन्ट कम्पनी प्रालिबीच १४ पुस २०७३ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजना हालसम्मकै ठूलो हो। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १६ करोड १३ लाख, एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले ३ करोड ९६ लाख, कोरियाली निर्यात–आयात बैंक (केएक्जिम) ले १० करोड, कोरिया डेभलप्मेन्ट बैंक (केडीबी) ले ३ करोड ८ लाख डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ।
यस्तै सीडीसी ग्रुप पीएलसी (सीडीसी)ले २ करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेभलप्मेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ)ले १ करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलप्मेन्ट फाइनान्सियल इन्सिटट्युशन (प्रोपारको) ले १ करोड १० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डको (ओएफआईडी) १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहने छ । द बैंक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैंकको रुपमा काम गर्ने छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुप्रति आभार व्यक्त गरे। त्यस अवसरमा उनले सरकारले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुकूल वातावरण बनाएको पनि स्मरण गराए।